Ezokungcebeleka - Ukuvakasha Komndeni | I-Seymour, IN | Isikhungo Sokuvakasha SaseJackson County
IJackson County inikeza i-adventure enkulu! Amahlathi amahle, isiphephelo sikazwelonke sezilwane zasendle nendawo yokuzilibazisa yombuso anikela ngamakhilomitha amaningi okuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni nemigwaqo yokugibela amahhashi, kanye namathuba okudoba, ukuzingela nawokukhempa. IJackson County inamakhaya ezifundo ezimbili zegalufu kanye nemicimbi eminingi yangaphandle yonyaka.
Chofoza lapha ukulanda i-BIKE Jackson County "Get Out and Ride" Map
Chofoza lapha ukulanda i-Jackson County Outdoor Rec Guide
Ezokungcebeleka zangaphandle eJackson County, IN
IJackson County ihlala inezinhlobonhlobo zemisebenzi yangaphandle yokuzijabulisa etholakalayo. Akunandaba noma isizini, kunokuthile okuhlangabezana nezintshisekelo zawo wonke umuntu.
Njengoba kunezinkulungwane zamahektare amachibi, amahlathi, kanye nokulondolozwa endaweni, iJackson County iyindawo ekahle kunoma yimuphi umthandi wemvelo. Okufaka izilwane zasendle ezahlukahlukene kusuka kuzinyamazane ezimhlophe kuya kuma-turkeys asendle, woza uzohlola la mazwe avikelwe bese wenza i-adventure ohlangothini lwasendle. Amahlathi ethu nokulondolozwa kwethu kuzojabulisa noma ngabe ufuna ukunyuka noma ithuba lokuzingela nokudoba. Futhi, qiniseka ukuthi ubheka imikhondo eminingi yamabhayisikili nezindawo zokukhempa zokuhlala isikhathi eside. Khipha bese uxhuma nemvelo njengoba bekufanele ibe nakho!
Ukuhamba izintaba kungumsebenzi odumile wezakhamizi nezivakashi zaseJackson County ngokufanayo. Lokho kungenxa yamathuba amaningi kubagibeli bawo wonke amazinga wesipiliyoni. Kunemizila yokuhamba izintaba engaphezu kwamamayela angama-50 eJackson County phakathi kweJackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge neStarve Hollow State Recreation Area.
Ama-Anglers avela kuso sonke isifunda agcwalisa amanzi eJackson County kuyo yonke inkathi ngayinye. Ngaphezu kwamathuba okudoba eHoosier National Forest, eJackson-Washington State Forest, eMuscatatuck National Wildlife Refuge naseStarve Hollow State Recreation Area, eJackson County kunemifula emibili ethokozelwa ngabadobi.
Umfula i-East Fork White River ugeleza udabule phakathi kweJackson County futhi unikeze izindawo eziningi zokufinyelela zomphakathi kuyo yonke indawo, engatholakala ngokuchofoza lesi sixhumanisi. UMfula iMuscatatuck unqamula emalokishini aseVernon naseWashington kanye naseJackson naseWashington Counties futhi unezindawo zokufinyelela zomphakathi eziningi. Labo abasebenzisa imifula eseJackson County bayanxuswa ukuba bathathe zonke izindlela zokuphepha futhi bafunde imithetho ngaphambi kokuqalisa. Funda kabanzi ngo- ngokuchofoza lesi sixhumanisi.
IKayaking yinto yokuzilibazisa ekhulayo eJackson County enabaningi abasebenzisa i-East Fork White River noMfula iMuscatatuck njengendlela yokuphuma bayohlola imvelo. AmaKayaks nawo avunyelwe eJackson-Washington State Forest, Starve Hollow State Recreation Area naseMuscatatuck National Wildlife Refuge. I-Starve Hollow ize inikeze nokuqashwa kwe-kayak okungasetshenziswa echibini layo phakathi nohambo lwakho.
Thatha isithombe somhlambi wama-cranes we-sandhill ngesikhathi sokufuduka kwabo kwentwasahlobo minyaka yonke njengoba izindawo eziningana e-Jackson County ziyizindawo zokuphumula zezinyoni. Hlola ukhozi olunempandla lapho ubaleka, ubuke ama-otter emfula egudla ndawonye emadwaleni, noma ubheke izinyamazane njengoba zidla emaphandleni.
Uqinisekile ukuthola izindawo eziningi zokuzijabulisa ngaphandle e-Jackson County!
IHemlock Bluff Nature Preserve
Ihlathi Lezwe LaseHoosier
IJackson-Washington State Forest / iSkyline Drive
I-Knobstone Glade Nature Preserve
IHickory Hills Golf Club
Ezinze emagqumeni aseJackson County, lezi zifundo zinezimbobo eziyisishiyagalolunye ezinamagceke angama-3,125 wabesilisa nama-2,345 abesifazane abane-par 35 kubo bobabili. Izinsizakusebenza zifaka ibha yokudla nezitolo. IHickory Hills Golf Club itholakala ku-1509 S. State Road 135 eBrownstown.
Etholakala kalula eduze ne-I-65, iShadoodood ifaka izimbobo eziyi-18 nge-par engama-72 kanye ne-yardage engu-6,709 333. Izinsizakusebenza zifaka i-clubhouse, i-pavilion, i-snack shop, i-pro shop, nebanga lokushayela. IShadoodood itholakala ku-XNUMX N. Sandy Creek Drive eSeymour.
Amatende E-Jackson County, IN
Uma wena nomndeni wakho nifuna indawo yohambo lwenu lwamatende olulandelayo, iJackson County inikeza amasayithi amaningi amahle alungele ukuphunyuka okufishane noma okude. Akunandaba ukuthi hlobo luni lwekamu ongahle ube nentshisekelo kulo, amasayithi ethu azokumboza.
Izindawo zethu zokuzilibazisa namapaki anikela ngezinhlobo ezintathu zamakamu: amakhumbi, amasayithi e-RV, nezindawo zakudala. Amakhabethe aphelele kulabo abakhetha ukulala ngaphakathi noma kulabo abangenalo itende noma i-RV. Izindawo zethu ze-RV zinikeza izivakashi indawo yokuthola ugesi. Amakamu akudala aklanyelwe ukukhempa ngokwendabuko, anamatende nokupheka ngomlilo ovulekile.
Amathuba wokukhempa womphakathi ayatholakala e- Ihlathi Lesifundazwe saseJackson-Washington or Indlala Yezindawo Zokuzilibazisa Eziyindlala.
Ngemuva kokuthola indawo enhle yokukhempa, jabulela ukuhamba ngezinyawo emizileni ehlukahlukene kusuka kokulula ukuya kokumangele ngokweqile. Ukugibela amahhashi kuyatholakala ezindaweni eziningi ezinemvume yombuso, njengokuhamba ngebhayisikili ezintabeni. Uma ukudoba ku-ajenda, iJackson County inezindawo ezahlukahlukene ongakhetha kuzo futhi inikeze nokuqasha izikebhe, izikebhe ze-kayak nezikebhe. Kudingeka ilayisense yombuso. Ungakhohlwa ngalabo abazingeli emndenini. Ukuzingela kuvunyelwe ezindaweni ezahlukahlukene ezinamalayisense afanele. Ababhukudi emndenini bazothanda ulwandle namanzi endaweni yaseStarve Hollow State Recreation Area.
IMuscatatuck Isiphephelo Sikazwelonke Sezilwane Zasendle eSeymour, IN
Sekuyiminyaka, izakhamizi zaseJackson County nezivakashi zijabulele ubuhle bemvelo eMuscatatuck National Wildlife Refuge. Njengoba kunezinkulungwane zamahektare ezinamaxhaphozi nezindawo ezingamahlathi, izivakashi zinethuba lokuzizwa zingaphandle ngendlela entsha ngokuphelele. Isiphephelo sitholakala e-US 50 ebangeni elifushane ukusuka ku-Highway 65 futhi sitholakala kalula kusuka e-Indianapolis, eLouisville noma eCincinnati.
Imisebenzi Yeziphephelo Zasendle
Lapho uvakashela iMuscatatuck Wildlife Refuge, kunemisebenzi yomndeni wonke. Okunye okuvelele kwesiphephelo, kubavakashi abaningi, yithuba lokubona izilwane endaweni yazo yemvelo. Lesi siphephelo sihlala ezinhlotsheni ezingaphezu kwezingama-300 zezinyoni ezifudukayo, ezihlanganisa nezinkozi ezinamakhanda ezibabazekayo. Abantu futhi bayakujabulela ukubuka ikoloni lendawo lama-otter njengoba bezingela futhi bedlala emifuleni yamanzi yesiphephelo. Kanye nokubuka kwezilwane, izivakashi ziyakujabulela ukuhamba ngezinyawo emigwaqweni ebabazekayo, futhi zivakashele iMyers 'Cabin, inqolobane ebuyisiwe, yokuqala yekhulu lama-20, ephethwe nguMyers Family. Ukudoba, ukuzingela, nezithombe zezilwane zasendle nakho kuyimisebenzi ethandwayo.
Lesi siphephelo sibuye sibe nemicimbi eminingana yaminyaka yonke okubandakanya iWings Over Muscatatuck, iLog Cabin Day, i-Take a Kid Fishing Day, iWetlands Day, umcimbi weSandhill Crane neminye eminingi.
IMuscatatuck Wildlife Refuge yasungulwa ngo-1966 njengendawo yezinyoni ezifudukayo ziyophumula zondle. Umsebenzi wawo ukuvikela nokubuyisela umhlaba nemigwaqo yamanzi, ukuvumela izinyoni, izilwane ezincelisayo, izilwane ezinwabuzelayo nezinhlanzi ukuthi zikubize ekhaya.
Izivakashi ezinemibuzo ngemicimbi ezayo, izindawo ezithile zokuzilibazisa, noma imisebenzi ethile kufanele zixhumane neMuscatatuck National Wildlife Refuge ku-Facebook noma zishayele ku-812-522-4352.